मेरो डायरीमा क.जिवराज आश्रीतः सन्दर्भ जेष्ठ ३
आज जेष्ठ ३ गते । लकडाउनको चवन्नऔं दिन । आज मात्र कोरोनाबाट प्रभावित एकजना सुत्केरी महिलाको मृत्युको खवरले सिंगो मुलुकलाई झस्काएकोछ ।
सत्ताईस बर्ष पहिले आजको दिन जननेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको दुःखान्त मृत्युको दिन हो । त्यस दिनको सन्दर्भमा वहाँहरु प्रति हार्दिक श्रद्धान्जली । आजको दिनको सम्झना गर्दै म क. जीवराज आश्रीतको बारेमा केहि सम्झनाका टिपोटहरु पस्कने प्रयास गर्दैछु । मदन भण्डारी कमरेडको बारेमा कुनैदिन छुट्टै लेख्ने जमर्को गर्ने नै छु ।
जीवराज आश्रीतसंगको सम्पर्क र संगै काम गरेको धेरै बर्षको अनुभव भए पनि वहाँको लेखोटहरु र वहाँसंग भएका सवै पार्टी कामका टिपोटहरु राख्न नसकेकोमा म अहिले पछुतो गरिरहेकोछु । पंचायतकालिन भूमिगत राजनीतिक परिवेशमा पार्टी वा जनसंगठनको हरेक गतिविधिहरुको भिडियो, फोटो, प्रत्येक कार्यक्रमहरुको नोटलाई व्यवस्थित फाइलिंग गरेर राख्ने, प्रत्येक व्यक्तिहरुको भनाईहरुलाई उदृढ गरेर व्यवस्थित गर्न सजिलो थिएन । यदि यस्तो हुँदो हो त अहिलेको पुस्तालाई पुरानो कुराहरु पढेर जान्न र आजको सन्दर्भमा पनि सहि लागेका कुराहरुलाई लागु गर्न कति सजिलो हुने थियो । त्यसबेला नेता, सेल्टर, पार्टी सामाग्री जोगाउने जस्तो गार्‍हो कुरा अरु थिएन । कुनै सानो गल्तीले पनि ठूल्ठूला दुर्घटनाहरु भएको हामीले अनुभव गरेका थियौं । मैले यहाँ केहि टुटफुट सम्झनाहरु मात्र शब्दको रुपमा पस्कने कोशिश गरिरहेकी छु ।
२०४० साल असार १६ गते म अखिल नेपाल महिला संघ केन्द्रिय समिति (अनेमसं) मा पुगेपछि अनेमसंको नियमित बैठकमा क. जिवराज आश्रीत पार्टीको इन्चार्जको रुपमा आउनु हुन्थ्यो । वहाँ बाहेक क.अमृत बोहरा (श्याम), क.माधव कुमार नेपाल (सुनिल) पनि आउनु हुन्थ्यो । खास खास प्रशिक्षण र भेलाहरुमा क. झलनाथ खनाल, क. सि.पि.मैनाली (जय) पनि आउनु हुन्थ्यो । कामको सिलसिलामा मैले के अनुभव गरें भने अखिल नेपाल महिला संघको तर्फबाट कमरेडहरुलाई चिठ्ठी कसरी लेख्ने, चिठ्ठी कसरी पुर्‍याउने आदि विषयमा विस्तृत रुपमा सम्झाई बुझाई निर्देशन दिने, माइनुट लेख्ने, महिलाको नामबाट लेख लेख्ने लगायत अनेमसंका साना भन्दा साना कामहरु समेत आश्रित कमरेडले गरी दिनु हुँदो रहेछ । त्यो सम्झँदा मलाई लाग्छ हिजो आज महिलाहरुको हक, हित, अधिकार, समानता, समावेशी, तेंतिस या पचास प्रतिशत महिला नेतृत्व आदि आदिको कुरा गरिरहेको बेला पुरुष भएर महिलाहरुको हक, हित, अधिकार तथा उत्थानको लागि क. जिवराज आश्रीतले गर्नु भएको योगदानलाई महिलाहरुले विर्सेमा त्यो ठूलो भूल हुनेछ । २०४१ साल चैत्र ९ गते मैले अनेमसंको सचिव (पहिले महासचिवको व्यवस्था थिएन र सचिवले नै प्रमुख रुपमा संघको जिम्मेवारी सम्हाल्नु पर्दथ्यो ) को जिम्मेवारी सम्हाले पछि क. जिवराज आश्रीतले गर्दै आउनु भएको अनेमसंसंग सम्बन्धित धेरै जसो काम आफैले सम्हाल्न थालें । लेख रचना, प्रतिवेदन, सिंहावलोकन रिपोर्ट, पर्चा सवै आफैले लेख्न थालें । वास्तवमा भन्ने हो भने आफूले जिम्मा लिई सके पछि कमरेडहरुसंग छिन छिनमा सोधिरहन र सहयोग मागिरहन मलाई लाज पनि लाग्दथ्यो । अनेमसंको मुखपत्रको रुपमा निस्कने महिलामुक्तिको चौथो प्रकाशन सम्पूर्ण रुपमा मेरै जिम्मामा आयो । तर त्यो बेला महिलाहरुको तर्फबाट राजनीतिक लेखहरु संकलन गर्न सजिलो भएन । अरु लेख रचना सहित उषा, प्रज्ञा र शोभा श्रेष्ठको नामबाट आफैले लेखेको तीन वटा लेखहरु महिला मुक्तिमा छापिएका थिए ।
"कमरेड तपाई यहाँबाट बसमा जानुस र मलंगवाको बस स्टप झर्नुस । बसबाट झरे पछि तपाईले एउटा स्टेशनरी पसल देख्नु हुन्छ । त्यहाँ इन्डियन टाइम्स पाईन्छ ? भनेर सोध्नुस् । पसलेले छैन, अरु भए हुन्न ? भनेर सोध्छन् । तपाई हुन्न त्यहि चाहिन्छ भन्नुस् । यो कोड संम्बाद हो । त्यसपछि वहाँले तपाईलाई अन्यत्र लग्नु हुन्छ । तपाई वहाँको पछि लाग्नोस् । त्यहाँ मनिषा (शान्ता मानबी) क. पनि भेट्नु हुनेछ ।” यो निर्देशन कसैको नभई क. जिवराज आश्रीतको थियो । पार्टीको काम गर्न सजिलो थिएन । कुनै सानो सूचना बाहिर गएको खण्डमा कोहि पनि ठूलो खतरामा पर्न सक्थे । म अखिल नेपाल महिला संघको जिम्मेवारीको कारणले नेपाल भरिका जिल्लाहरुमा गई नै रहनु पर्दथ्यो । प्रत्येक पल्ट नयाँ जिल्लामा जानु पर्दा यस्तै कोड शव्दव्दारा नयाँ नयाँ कमरेडहरुको सम्पर्कमा पठाउनु हून्थ्यो जिवराज आश्रीतले । म मात्रै होईन पार्टीका कुनै पनि नेता तथा कार्यकर्ताहरु बिना कुनै हिचकिच्याहट, कुनै तर्क बितर्क नेता तथा पार्टीका आदेश वा निर्देशनहरु पालना गर्दर्थे । पार्टी र नेताको बिश्वासको आधारमा कार्यकर्ताहरु आफूले जान्दै नजानेको ठाउँमा जान र आफूले चिन्दै नचिनेको व्यक्तिसंग भेट्न पनि सक्षम हुन्थ्ये । क. जिवराज आश्रीतले म जस्तै कयौं कार्यकर्ताहरुलाई कठिन बाटोमा हिड्न सिकाउनु भयो, प्रेरित गर्नु भयो र सफल पार्नु भयो ।
जीवराज आश्रीत कमरेडसंग भेट हुँदा त मलाई रमाईलो लाग्थ्यो । आफ्नो अगाडी आईरहेका सवै समस्याहरु समाधान होला भन्ने लाग्दथ्यो । तर उहाँको पारिवारिक जीवन भने अनेक कठिनाईहरुले भरिएको थियो । काठमाडौंको नरदेवीमा भगवान रत्न तुलाधरको घरमा भूमिगत कमरेडहरु बस्ने एउटा सेल्टर थियो । त्यस सेल्टरको लागि चाहिने खर्च खुला रुपमा पेशा गरेर बस्ने साथीहरुको चन्दा र सहयोगले चलेको थियो । त्यहाँ सानो ठूलो गरी तीन चारवटा कोठाहरु भएकोले भूमिगत कमरेडहरु आउने जाने र केहि स–सानो समूहहरुमा बैठकहरु गर्नको लागि सहज थियो । मेरो जिम्मेवारीको कारण त्यहाँ गइरहनु पर्दथ्यो । एक दिन त्यहाँ क. झलनाथ खनाल बसिरहनु भएको थियो । त्यहाँ अर्को एउटा कोठामा माया ज्ञवाली (जीवराज आश्रीतको धर्मपत्नी) करिव एक डेढ वर्षको छोरालाई लिएर केहि समय त्यतै बस्नु भएको थियो । मलाई झलनाथ कमरेडले एक्लै बोलाएर माया ज्ञवालीको कोठामा केहि दिन देखि खानेकुरा केहि नभएको र वहाँ भोकै रहनु भएको सुनाउनु भयो । मैले त्यसपछि लगतै केहि सामान आफ्नो घरबाट जम्मा पारें र पाँगा, किर्तिपुर गरी केहि चामल, चिउरा र अन्य केहि साथीहरुबाट पैसा संकलन गरी त्यो सेल्टरमा पुर्‍याई दिए । त्यो सानो सहयोगले पनि क. माया लाई केहि राहत मिलेको हुनु पर्दछ भन्ने मैले आफूलाई आश्वस्त पारें । जनताको घर दैलोमा पुगेर संगठन गर्नेहरुले आफ्नो परिवारको सुख त्याग्नु पर्ने वाध्यताको एक नमूना थियो त्यो । वहाँले परिवारको समस्या हुँदा हुँदै पनि अबिचलित रुपमा पार्टीको संगठकको रुपमा भुमिका निभाई रहनु भयो । माया कमरेडले पनि श्रीमानले राजनीतिको लागि गर्नु भएको त्याग, तपस्याको साथसाथै धर्मपत्नीको हैसियतले सहनशिलता र धैर्यता राखी सवै खालका कष्ट सहि श्रीमानलाई साथ दिई रहनु भयो । एउटा सफल योद्धाको पछाडी महिलाहरुको हात हुन्छ भन्ने कुरा वास्तव मै सहिछ ।
२०४६ साल जेष्ठ २८ देखि ३० गते सम्म अखिल नेपाल महिला संघको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन हुने निर्णय भयो । त्यो बेला बागमती र उपत्यकाको अनेमसं हेर्ने जिम्मा मेरो थियो । म अनेमसंको सचिव पनि भएको हैसियतले मैले सेल्टर, खानपानको व्यवस्था गर्ने, विभिन्न जिल्लाबाट आएका महिलाहरुलाई सुरक्षित ढंगले सेल्टरमा लाने, राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन र प्रस्तावहरु लेख्ने आदि काम गर्नु पर्दथ्यो । पार्टीको जिल्ला कमिटीको तर्फबाट सम्मेलन व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा किर्तिपूरका एक जना कमरेडलाई (क.कृष्ण गोपाललाई) दिईएको थियो । सम्मेलन किर्तिपुरमा रीना महर्जनको घरमा हुँदैछ भन्ने कुरा मलाई सूचित गरियो र म त्यसमा ढुक्कै थिएँ । तर सम्मेलन जस्तो बिषयमा तयारीमा कमजोरी गर्नु हुन्न जस्तो लागेर सम्मेलनको एक दिन अगाडी सेल्टरको बारेमा आफैले जाँच गर्ने निर्णय गरें । त्यसकारण म सिधै त्यो घरमा गएँ र सम्मेलनको बारेमा सोधी खोजी गरें । स्थानीय कमरेडहरु मेरो कुरा सुनेर छक्क पर्नु भयो । किनकि वहाँहरुलाई सम्मेलनको व्यवस्थापन बारेमा केहि जानकारी गराएकै रहेनछ । मलाई चिन्ता यसकारणले भयो कि भोली देखि प्रतिनिधिहरु किर्तिपुर आउन थाल्ने छन् र सम्मेलन हुने घर थाहा पाउन कोशिश गर्नेछन् । त्यो अव्यवस्थाले सवै महिला साथीहरु, सेल्टर दाता, गाउँका अरु कमरेडहरु र सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई नोक्सान पुर्‍याउन सक्नेछ । त्यो बेला कमरेड अष्टलक्ष्मी शाक्य झापाबाट आउँदा आउँदै पक्राउ पर्नु भएको खवर आइ सकेको थियो । धेरै जसो महिला कमरेडहरु जिल्ला जिल्लाबाट हिडेर बाटो बाटोमा पुगिसकेको जानकारीमा आएको थियो । उ बेला अहिले जस्तो मोबाइलको सुबिधा थिएन । नयाँ ठाउँको जानकारी दिन सम्भव थिएन । जसरी पनि किर्तिपुरमा सम्मेलन गर्नु पर्ने थियो । मैले तुरन्तै केहि साथीहरुलाई भेला गर्न लगाएँ र समस्यालाई विस्तृत रुपमा पेश गरें । त्यहाँका स्थानीय कमरेडहरुले बिना हिचकिच्याहट त्यत्रो ठूलो जिम्मेवारी लिन तयार हुनु भयो र ठाउँको तय भयो । सम्मेलन गर्ने ठाउँ किर्तिपुरको समल टोलमा चिरिभाईको घरमा गर्ने निर्णय भयो । म किर्तिपुरबाट फर्कें र स्थिति र तयारी बारे क. जिवराज आश्रीत र क. सुरेन्द्र पाण्डेलाई जानकारी दिएँ । त्यहि राती क. जिवराज आश्रीत र म फेरि किर्तिपुरको सम्मेलन गर्ने सेल्टरमा पुग्यौं र सम्मेलनको सफलताको लागि विस्तृत योजना बनाउन थाल्यौं । सम्मेलन भूमिगत शैलीमा सफलतापूर्वक टुंगियो । त्यस कामको निम्ति मैले सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति, नेता जिवराज आश्रीत मात्र होईन सम्पूर्ण किर्तिपुरबासी कमरेडहरुलाई पनि हार्दिक अभिवादन गर्दछु ।
२०४६ सालमा बहुदल आई पार्टी खुला भैसके पछि २०४८ सालमा पार्टीले राष्ट्रिय परिषदको बैठक पोखरामा दिपेन्द्र राष्ट्रिय सभागृहमा गर्ने तय गरेको थियो । अखिल नेपाल महिला संघको केन्द्रिय कार्यालय परोपकार भिमसेनस्थान काठमाडौंमा राखिएको थियो । अनेमसंको पहिलो सम्मेलन पछि अध्यक्षमा क. अष्टलक्ष्मी शाक्य हुनु भएको थियो र म महासचिव थिएँ । त्यो बेला मेरो जेठो छोरो सानो थियो र म बलम्बुको बिद्यालयमा पढाउँदै एकजना बिद्यार्थीको घरमा सेल्टर गरेर बस्थें । मलाई पनि पोखराको त्यो भेलामा जान इच्छा थियो । अनेमसंको महासचिवको हैसियतले म त्यस बैठकमा जानैपर्ने पनि थियो । तर पार्टी र अनेमसं खुला भैसके पछि महिलाहरुमा यति धेरै उछिना पाछिनको विचारहरु आउन थाले कि आफ्नो स्वार्थको लागि ससाना गुट समेत बनाउन थाले । महिलाहरुले पनि चाप्लुसी र ढाँटका अनेकौं कुराहरु गर्न कति सिपालु बनिसकेका थिए । साना ठूला स्वार्थका कारण आफ्नै समकालिन साथीहरुलाई समेत पेलपाल गर्ने बातावरण बन्दै गयो । एक आपसमा अस्वस्थ प्रतियोगिताको भावना बढ्न थालेको देखियो । त्यसको चपेटामा म परें । मेरो छोरो सानै थियो । रोगी र रुन्चे थियो । आमाको मायाले त्यसलाई मबाट टाढै राख्ने दुष्प्रयास पनि मैले गर्न सकिन । मलाई पोखरा नलैजानको लागि सानो स्वार्थका गुटले धेरै प्रयास गरे । तर जिवराज आश्रीतको विवेक र सुझवुझले मैले त्यस भेलामा भाग लिने मौका पाएँ । स्वार्थमा लिप्त व्यक्तिहरुले त्यो भेला भरि नै मलाई अनेकौं अड्को थापि नै रहे । महिलाहरुको समानता र अधिकारको लागि पुरुषहरुको कति ठूलो हात हुन्छ भन्ने कुरा क. जीवराज आश्रीतको यो कामबाट सिक्न सकिन्छ ।
२०४६ सालमा बहुदल आइसके पछि क. जीवराज आश्रीत जीवन तुलाधरको घर डल्लुमा डेरा गरेर बस्नु भएको थियो । कामको सिलसिलामा म वहाँलाई भेट्न गएकी थिएँ । पार्टी, अनेमसं आदिका कामहरु बारे केहि छलफल भयो र मैले आफ्नो बिचारमा लागेका केहि कुराहरु भनें । वहाँले एक एक गर्दै मेरो भनाईहरु टिप्नु भयो र सुझाव दिएकोमा मलाई प्रशंसा गर्नु भयो । म दंग भएँ । वहाँमा को ठूलो र को सानोको विचार नराखी कार्यकर्ताको विचार र सुझाव सुन्ने बानी एउटा उदाहरण नै थियो । वहाँबाट सिक्नु पर्ने धेरै कुरा मध्ये यो पनि एक हो ।
विसं २०५० साल जेष्ठ ३ गते अचानक वहाँको देहान्त भएको खवर सुनें । मन धेरै दुख्यो । सम्झँदा अझै पनि गाहारो हुन्छ । वहाँको देहावसानको केहि समय पछि म माया ज्ञवालीको डेरामा फेरि गएँ । पहिलेको र पछिको बातावरण एकदमै फरक पाएँ । त्यहाँ पहिले जस्तै कार्यकर्ता तथा नेताहरुको कुनै भीड थिएन । सुनसान चकमन्न वातावरण थियो त्यहाँ । त्यो बेला क. मायाले भन्नु भएको कुरा अझै सम्झिरहेकीछु, “मानिसहरु बलेको आगो ताप्छन्, नबलेको ताप्दैनन् ।” यो कुरा महिलाहरुको लागि शिक्षा पनि हो कि महिलाहरु नेताको धर्मपत्नी भएर मात्र पर्याप्त हुँदो रहेनछ । महिलाहरु आफै सक्रिय योद्धाको रुपमा प्रस्तुत हुन सक्नु पर्दो रहेछ । महिलाहरुले समाज, पार्टी तथा देशको लागि गरिने निरन्तरताको कामले मात्र महिलाहरुले चाहेको मान, सम्मान, सहयोग निरन्तर रुपमा पाई रहँदो रहेछ । आगो भई महिला आफै पनि बलिरहनु पर्ने रहेछ, जसले अरुलाई ताप दिई रहन सक्दछ । हार्दिक श्रद्धान्जली जिवराज कमरेड ।